Umsantsa kwiTekhnoloji yeNtengiso? | Martech Zone
Umsantsa kwiTekhnoloji yeNtengiso?
NgoMvulo, Juni 15, 2009 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Kwiminyaka emininzi eyadlulayo ndandingumhlalutyi wephephandaba. Veki nganye bendibhala idatha kuzo zonke iinkqubo zemveliso kunye nokusasazwa kwaye ndisebenze ukufumana apho kukho ixesha okanye imali yokugcina. Kwakungumsebenzi onzima kodwa ndandinenkokheli efanelekileyo kwaye kule minyaka ilishumi ndisebenza apho, sinciphisa uhlahlo-lwabiwo mali lokusebenza unyaka nonyaka.
Kwakungumsebenzi onomvuzo omangalisayo. Ndinoxanduva lobuqu kuhlahlo-lwabiwo mali lwezigidi ezininzi- ke ukufumana inkunkuma akuzange kuvumele inkampani ukuba yonge imali, ikwavumele ukuba ndichithe imali apho ibifuneka kakhulu. Kwakuzalisekisa ukubonelela abasebenzi ngezixhobo kunye neetekhnoloji eziyimfuneko ukwenza ubomi babo bube lula.
Ukufumana ithuba kwinkqubo phantse bekusoloko kusikhokelela Uqhagamshelwano kwinkqubo, kodwa hayi kwiinkqubo ezahlukileyo ngokwazo. Ubusuku obuninzi, oomatshini bokushicilela bebebaleka ngokugqibeleleyo, izixhobo zokufaka bezingenasiphako, iilori bezihamba kakuhle, kwaye abathwali basebenze nzima ukufumana iphepha emnyango kwakho. Phakathi, nangona kunjalo, abathumeli bexinekile, imigca isilele, iipalethi zawa, iiloli ezazilayisha zasilela, kunye nokugcwala kwabantu kwezithuthi.
Ngamaxesha ambalwa eminyaka urhwebo Uhlalutyo ngoku emva kwam, amathuba awatshintshanga. Emsebenzini wam, iisayithi zisebenza kakuhle, iileta zeendaba ziphuma zilungile, the kubahlalutyi Kulungile, ibhlog yakho iyamangalisa, iifowuni zokuthatha amanyathelo ziyacofa, kwaye kukhokelela ekongezwa kwi-Salesforce.
kunjalo, onke amanqaku onxibelelwano phakathi kuyasilela. Incwadana yeendaba ayihambelani nendawo kunye nendawo kubahlalutyi. The kubahlalutyi ukubambisa iblorho yezibalo, kodwa hayi ezinye zeenkcukacha ezibalulekileyo ezivela kwisiza okanye kwibhlog. Ibhlog iyatsala uninzi lwezithuthi, kodwa ukulandelela abantu kwibhlog ukuya kwindawo yecandelo kulahleka. Kwaye ngaphakathi kweSalesforce, asilandeleli amagama aphambili awazisileyo, amanqaku awafundileyo, okanye i-CTA abacofileyo. Unxibelelwano luye lwaphuka.
Kwaye akukho lula ukuzilungisa!
Iqela lethu lezentengiso liyazi ukuba yintoni eyenziweyo, baswele nje izibonelelo zokuba yonke isebenze ngaphandle komthungo ngoku. Andikholelwa ukuba oku kwahlukile kuyo nayiphi na enye inkampani… sonke sinengxaki yokungasebenzi kakuhle ngenxa yeenkqubo zethu zokudibanisa kunye nokuzenzekelayo. Kube ngumnqweno wam iminyaka emininzi, kodwa andiqinisekanga ukuba naluphi na uphuhliso olukhulu lufikile kwintengiso.
Njengoko ndijonge kwikamva leTekhnoloji yeNtengiso, andikholelwa ukuba amathuba akhoyo kubo ngokwabo ... ndiyakholelwa ukuba balala kunxibelelwano phakathi kwabo.
tags: Ukuqwalaselwa kwemephuamanqaku ekloutukuthengisa kufutshane
Iplagi yePostPost yeWordPress ephuculweyo
Uxolo Disqus, Ndingumlandeli ngoku!
Jun 16, 2009 ngo-12:42 AM
Ok undikhubekile, kumacala amabini. Okokuqala, ngaba kubalulekile ukubala? Ukuba ubuyenze nje into oyenzileyo kwaye ungayilinganisi, ingaba ibisabala? Okwesibini, ndixakiwe ngu "Salesforce" ke ndiza kujonga leyo ...
Jun 16, 2009 ngo-8:52 AM
Ukuba asibali, sazi njani ukuba umsebenzi wethu unemivuzo? Re: Salesforce - yisoftware njengenkonzo (kwi-intanethi) umanejala wobudlelwane bomthengi (CRM). Ngokusisiseko, ungagcina umkhondo wesikhokelo kunye nabathengi, yonke indawo yokuchukumisa kunye nabo, amathuba, njl.njl. Kwintlangano enamasebe amaninzi okanye abathengi abaninzi awukwazi ukukhumbula, iCRM ibalulekile ukuze ube nabo bonke abathengi. ' iimbali ezandleni zakho.
Ndiyavuya ubuze! Ngamanye amaxesha ndiba ne-geeky kakhulu apha 🙂